Great YouTube Educational Channels na-atụ aro na Download Edu Videos
> Resource> YouTube> Olee otú Download Videos si YouTube Education Channels
Kemgbe ya inception, YouTube emewo a ịrịba jide na lekwasịrị ahịa gburugburu ya. Mba ndị ọzọ na website kemgbe-enwe ike adịgide ọ bụla dị ka otu larịị nke uche na nju na YouTube enye, ọ bụghị banyere ihe ndị pụrụ ego na-eme ka ikike. YouTube na-enye anyị a mara mma ịrịba n'ọbá akwụkwọ nke videos - ụfọdụ ga-ujo, ụfọdụ ga-eme ka anyị na-achị ọchị, na ụfọdụ na ga-enye anyị ihe ọmụma bara uru.
The agụmakwụkwọ vidiyo na YouTube bụ amamiihe, na e nwere ọtụtụ nke YouTube ọwa melite kpọmkwem banyere nke a ụdị ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ iji YouTube mụbaa gị horizons a ntakịrị ihe, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na ị na-ego ndị a ise amamiihe Educational YouTube ọwa.
Nkebi nke 1: Top 5 YouTube izi ọwa
Part 2: Olee otú ibudata niile vidiyo si na YouTube izi ọwa
Ebe a bụ n'elu 5 ndepụta nke YouTube izi ọwa.
SciShow na-etinye ya oge na-achọ n'ime a nnukwu iche iche nke dị iche iche echiche site n'oge gara aga na ugbu a. Na iji ha nka, ha na-agbalị debunk ma ọ bụ ike myths na rumo ihe karịrị afọ na-agbalị na-achọpụta ụfọdụ n'ezie pụtara ìhè eziokwu. Ọfọn uru a, lee!
Ted-Ed-mejupụtara a nnukwu ìgwè dị iche iche ndị ọkachamara na echiche. Mee ka ọtụtụ nwere ọgụgụ isi uche, e nwere kwa izu videos tọhapụrụ karịsịa kwupụta izu ụka. Nke a bụ oké ebe dị nnọọ chọpụta ụfọdụ n'ezie na-akpali echiche ma na-echepụta, na ụfọdụ egwu na-aga aga ha n'azụ.
Nke a ọwa na-agba mbọ na-enye anyị niile ihe ekele nke dị nnọọ otú mma physics bụ n'eziokwu. Ọ na-agba mbọ na-enye a mma nghọta nke ụzọ kasị mma ịghọta na iwekota onwe gị na physics. Ọ bụ a amamiihe mmụta ngwá ọrụ kamakwa dokwara jụụ ịhụ ihe ndị ha na-agbali na-atụle!
CrashCourse ekpuchi isii nke ndị akacha kụziiri achị - History, Biology, Literature, Ọmụmụ, Chemistry na US History. Niile nke ndị a bụ oke na-achị ma ọ bụrụ na ị na-adọga na-akụziri na mkpa a bit nke enyemaka, nke a bụ ebe a na-amalite!
N'ụzọ nkịtị, a ọwa nwere imerime videos banyere nọmba. Ihe ọ bụla na-eme na nọmba, e nwere nanị nke ukwuu akporo na nke a ọwa na-agbalị nchikota ya elu ma ọ bụ kọwaa echiche n'azụ ya bụ incredibly siri ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-abuana ke maths na niile nke a bụ oké ọwa na lelee.
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata niile vidiyo si na YouTube izi ọwa
Ugbu a, nsogbu na apụ niile nke ndị a oké anatara na Nkuzi na-agbalị na-ele ya niile mgbe ọ bụla ị chọrọ. Mgbe niile, ụfọdụ n'ime ndị a n'ezie ọlaedo akwụkwọ na nnyocha ihe onwunwe, ziri ezi? Ya mere n'ezie na ị chọrọ nwere ohere ya mgbe niile? Ọfọn, anyị aka, ị pụrụ. Ebe a bụ ụzọ ibudata niile videos si YouTube izi ọwa na-ekiri ọbụna mgbe ị na-adịghị njikọ Ịntanetị.
Mmemme mkpa ka ị download YouTube-Wondershare AllMyTube
1. Download ọ bụla YouTube videos na listi ọkpụkpọ mfe na ngwa ngwa
2. tọghata videos iche iche formats iji na na na obere ngwaọrụ
3. Download videos si mmezi 100+ video saịtị dị ka ezumike, Vimeo, na ndị ọzọ
4. Video ọkpụkpọ na njikwa
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata YouTube izi videos na otu click
Nzọụkwụ 1.Install a Downloader
Download a ndutịm n'elu njikọ na n'uche na e nwere abụọ nsụgharị. Ẹkedori usoro ihe omume iji nweta njikere.
Mgbe ị na-YouTube izi videos, pịa ha na-egwu. A ga-enwe a Download button sere n'elu. Pịa bọtịnụ na-enweta video ebudatara. I nwekwara ike idetuo video url site na ihe nchọgharị adreesị mmanya na pịa Paste URL bọtịnụ na isi window.
Nzọụkwụ 3. tọghata videos ndị ọzọ formats (nhọrọ)
Gaa Finished n'ọbá akwụkwọ ịchọta videos. Pịa tọghata na nri ma họrọ a usoro. Pịa Ok na-amalite converting. Mgbe ahụ ị pụrụ nyefee videos na na na gị obere ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla format incompatibility nsogbu.